Waan fahamsanahay taas dhawaaqii dhawaa isbeddelka ku yimaad deeq-bixiyahayada waxay suurta gal tahay inuu kiciyay su'aalo badan. Waxaan hiigsaneynaa inaan sida ugu wanaagsan uguna jawaab celino jawaabaha aad halkaan ku aragtid. Haddii aadan arkin jawaabta su'aal gaar ah oo adiga muhiim kuu ah, fadlan ku dar su'aashaada qeybta faallooyinka ee hoos ku xusan, waxaanan ku dadaalaynaa sida ugu fiican inaan jawaab toos ah uga jawaabno oo aan cusboonaysiinno boggan.
Fikradda iyo Geedi socodka
Yoolalka Barnaamijyada Cusub iyo Aagagga Diiradda
Geedi socodka loogu talo galay Deeq bixiyaasha
Waxa Laga Filayo Go'aan Hore
Faallooyinka iyo Jawaab-celinta
1. Maxaa isbeddelaya oo ku saabsan deeqaha McKnight?
Bishii Janaayo, waxaan ku dhawaaqnay Qaabka Istaraatiijiyadeed ee 2019-2021 iyo howsha cusub: ilaa horumariyaan mustaqbal keli ah, hal abuur leh, iyo mustaqbal ballaaran oo ay dadku iyo meeraha u soo baxaan.
Falanqayn badan kadib, guddiga agaasimeyaasha McKnight waxay go’aansadeen inay kordhiyaan diiradeena laba arrimood oo mudnaan leh: sare u qaadista xalalka cimilada iyo dhisidda Minnesota oo si caddaalad ah loo wada dhan yahay.
Taas macnaheedu waa waan fidinaynaa barnaamijkeena hada jira ee Cimilada & Tamarta Midwest (MC&E). Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku beddelaneynaa laba barnaamijyadeena hadda ah - Gobol & Bulsho (R&C) iyo Waxbarasho — barnaamij cusub oo diiradda lagu saarayo dhisida beelo loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay ee gobolka Minnesota. Hadafka cusub waa: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijkaan cusub ee jaaliyadaha marka la gaaro deyrta 2020, waqtigaas oo deeq bixiyeyaasha ku habboon shuruudaha laga dalban karo maaliyad cusub.
Fadlan aragkeena ogeysiinta dadweynaha iyo qoraallada la xiriira ee ku qoran boggaga barnaamijka fidsan ee barnaamijka MC&E iyo barnaamijka bulshada soo ifbaxa faahfaahin dheeraad ah.
Ugu dambayntii, waxaan go’aansannay in aan qorrax u dhaceyno barnaamijkayaga wabiga Mississippi.
Haddii aad deeq-bixiye ka tahay barnaamijka Wabiga, Waxbarashada, ama barnaamijka R&C, fadlan hoos ugu bogo boggan Geedi socodka loogu talo galay Deeq bixiyaasha.
2. Sidee buu McKnight u qaatay go'aamadaas? Miyay McKnight raadsatay fikradda bulshada ee go'aan qaadashada?
Himiladeenna cusub, oo ah in hore u sii kordhi, cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u badan halkaas oo ay dadku iyo meerahaadu ku najaxaan, Waxay horseedday isbeddeladaan, iyo sidoo kale duruufaha deegaankeenna dibedda ah.
Haddii aan rabno inaan aragno mustaqbal ay dadku iyo meerahaagu ku najaxaan, waa inaan sameynaa wax walba oo aan kari karno si aan u dhisno Minnesota loo dhan yahay oo loo wada dhan yahay oo aan dardargelinno xalalka cimilada. Taasi waa sababta aan u ballaarinayno ballanqaadkeenna labadan qaybood: ka jawaabidda waxa aan aaminsanahay inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee qarnigeenna, oo aan rajeyneyno, inaan u horseedno jidka kuwa kale inay sidaas oo kale sameeyaan.
Fadlan aragkeena ogeysiinta dadweynaha oo si faahfaahsan u sharraxaya isbeddeladaan.
Tan iyo markii la qaatay Qaab-dhismeedka cusub ee Istiraatiijiyadeed ee Janaayo 2019, guddiga McKnight iyo shaqaaluhu waxay galeen xilli dib-u-eegis istiraatiijiyadeed ah oo qiimeynaya halka aan hadda ku sugan nahay, sida aan si ka sii fiican u sii wanaajin karno, iyo halka aan nafteenna ugu tartameyno inaan aadno. Guddigu waxay ka maqleen la-taliyeyaasha khubarada, asxaabta qaranka, kooxaha bulshada, iyo shaqaalaha xiriir qoto dheer la leh jaaliyadeena.
Markii aan sii horumarinay tilmaamaha barnaamijka ee shaqadeena horay u soconaya, kooxdeena waxay sii wadi doonaan la tashiga iyo la shaqeynta dadka kale sida aan ugu dadaalno hab caqli iyo hufnaan leh. Iyada oo aasaaska ah, waxaan sugeynaa sii wadashaqeynta iyo daacadnimada jawaab celinta laga helo shuraakada aan la shaqeynay, si aan u hubinno inaan ku sii socono himiladeena iyo himilooyinkeena.
Bishii Nofeembar 2019, waxaan ku casuunay fikradaha su’aalo-weydiinta si aan ugu sheegno wada-hadalladayada sidii aan u horumarin lahayn tilmaamaha barnaamijka ee cusub barnaamij bulsho oo loo wada siman yahay. Foomka su'aalaha hadda waa xiran yahay. Waxaan u mahadcelineynaa cid kasta oo ka soo qeybgashay.
3. Sideen codkeyga ugu dari karaa madaama McKnight uu gaaro go'aano dheeri ah oo kusaabsan istaraatiijiyada?
Waan soo dhaweyneynaa oo qiimeyneynaa fikradahaaga iyo fikradahaaga. Sida ugu wanaagsan ee loo wadaagi karo codkaaga waa adigoo la xiriira sarkaalka barnaamijkaaga ama xiriiriyaha aasaasiga ah ee aasaaska. Waxaad kaloo ku dari kartaa su’aal ama faallo hoosta.
4. McKnight ma tixgelisay saameynta isbeddeladaani ku yeelan karaan waaxdeyda ama beeshayda?
Waxaan si qoto dheer uga taxadarnaa dhamaan bulshada iyo waaxaha aan u adeegno waxaana si qoto dheer uga fiirsanay saameynta isbedeladaan. Waxaan qiimeyneynaa cilaaqaadka qoto dheer ee aan sameysanay, waxaana naga go'an inaan u gudubno mas'uuliyad iyo daryeel kumeel gaar ah, la-hawlgalayaashayada, waaxaha, iyo bulshada ay u adeegaan. Wareegyadan ayaa ka soo ifbaxaya qoto dheer oo ku saabsan waxa ugu sarreeya iyo sida ugu wanaagsan ee loo adeegsado ilahayada dhaqaale.
5. Miyaad sharixi kartaa waxaad ula jeedo hadaladaada hadafka cusub?
Hadaladeena hadafkeena cusub waa:
Tallaabo geesinimo leh ka qaado dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboon-ga Karbaashka ee bartamaha-galbeed sannadka 2030.
Hadafkan, waxaan tilmaamaynaa heer hammi sare leh, waxa dhiirrigeliyay sida ugu badan ee dhallinyaradeenna iyo sida loo wada qabo cilmiyaysan, in aan haysanno wax kabadan toban sano si aan uga hortagno masiibada ugu xun. Waxaan ognahay inay Midwest muhiim u tahay guusha cimilada, maadaama ay tahay soosaarayaasha lixaad ee ugu weyn gobolka ee ka baxa qiiqa gaaska adduunka. Waqtiga 2030-ka waxaa loola jeedaa heerka caalamiga ah ee loo isticmaalay in lagu cabbiro horumarka cimilada, waana xusuusinta deg-degga loogu baahan yahay shaqadan.
Si aan u gaarno himiladaan, waxaan (1) dardargelin doonnaa horumarka waaxda tamarta, (2) waxaan dooran doonaa gawaarida, guryaha, warshadaha, iyo dhismayaasha leh ilaha tamarta nadiifka ah, iyo (3) inaan hubinno iskuxirka kaarboonka, gaar ahaan dhulalka shaqada ee Midwest.
U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
Hadafkan, Waxaan cadeyneynaa suurtagalnimada mustaqbal xamaasad leh dhamaan reer Minnesota guud ahaan isirka, dhaqanka, qowmiyadda, dakhliga, juqraafi, iyo kala duwanaansho kale. Waqti markii gobolkayaga gobolka Minnesota uu si joogto ah ugu tiirsan yahay mid ka mid ah kuwa ugu xun farqiga u dhexeeya isir-nacaybka, waxaan aragnaa mustaqbal halkaas oo dadka midabka leh iyo dadka asaliga ah - oo ku kala duwan fursadaha iyo natiijooyinka — kasbadaan oo awood jimicsi leh, bulsho ahaan barwaaqo, dhaqan ahaan, iyo dhaqaale ahaanba, oo si buuxda uga qaybgal nolosheenna bulshada.
Iyada oo la sii amba qaadayo go'aan qaadashadeena bulshada ku nool gobolka Minnesota, barnaamijka cusub ayaa sameyn doona diiradda lasaarayo kor u qaadida dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, hormarinta hormarinta sinaanta, iyo kordhinta ka qeyb qaadashada bulshada.
6. McKnight ma awoodi doonaa inuu faahfaahin ka bixiyo istiraatiijiyaddiisa cusub markay diyaar ahaadaan oo la shaaciyo?
Haa, gabi ahaanba. Waxaan si buuxda oo cad u wada xiriiri doonnaa istiraatiijiyadeenna cusub iyo fikradaha markey diyaar yihiin oo la shaaciyo, laga yaabo inay dhici doonaan 2020. Aniga oo ku muujinaya isbadal iyo ixtiraam la-hawlgalayaashayada, waxaan ku wargalin doonnaa deeq-bixiyeyaashayada, bulshada, iyo asxaabtayada sida fikirka iyo hawlgalkeenna. isbeddel.
7. Maxaa loogu ballaarinayaa cimilada? Mu'asasaduhu dhab ahaantii "ma xallin karaan" arin aad u weyn?
Waxaan ku nool nahay waqti aan cillad bulsheed oo aan hore loo arag iyo cimilo adduunyo ah - oo mar kale ugu baaqaya hay’adaha inay noqdaan kuwo dhiiran oo khayaali ah. Waxaan ka jawaabeynaa baaqa isbedelka; dhibaatada cimilada waa mid aad u deg deg ah in la sameeyo haddii kale.
In kasta oo Ururka McKnight Foundation uusan xallin karin dhibaatada cimilada, haddana waxaan taas ognahay: Midwest wuxuu muhiim u yahay guusha jawiga. Midwest waa soo-saareyaasha lixaad ee ugu weyn adduunka ee ka-baxa gaaska - iyo haddii adduunku uu laalayo cawaaqib xumada ugu weyn ee isbeddelka cimilada, wuxuu u baahan yahay Midwest inay sidaas sameyso.
Himiladeena cimilada ayaa ah hammi, iyo la-hawlgalayaashayada, waan gaari doonnaa iyaga. Anaga oo ku dhismay qaabkeena ku saleysan gobolka iyo raadkeena wadajirka ah ee aan la kaashanayno maalgaliyeyaasha kale ee gobolka, waxaan sii wadaynaa horumarinteenna illaa iyo hadda anagoo u sameynayna boos abuur iyo waxbarasho cusub. Waxaan aaminsanahay in qof walbaa waa inuu kaalintiisa ka qaato cimilada. Tani waa annaga.
Wax dheeri ah baro ku saabsan sababta tallaabada geesinimada leh ay muhiim ugu tahay aragtida shaqada hortiis Aimee Witteman, oo ah agaasimaha barnaamijka MC&E.
8. Anigu waxaan ahay deeq-bixiye hadda McKnight. Miyaan ku habboonaan doonaa tilmaamaha cusub ee maalgelinta mustaqbalka?
Waa macquul, laakiin si fudud waa goor hore in la yiraahdo. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaheena cusub ee barnaamijka deyrta 2020. Fadlan ku soo noqo boggayaga waqtigaas wixii faahfaahin dheeri ah ee ku saabsan tilmaamahayaga iyo u-qalmitaankeena.
9. Miyey jiri doonaan kordhinta deeqda ku-meelgaarka ah haddii aan iswaafajiyo?
Waa macquul. Markii aan sameyno wareegyo waaweyn, McKnight waxaa ka go'an inuu si mas'uuliyad leh hoos ugu dhigo deeq-bixiyahaaga iyo siinno deeq-bixiyeyaasha sida ugu horreysa ee ogeysiiska ah ee suurogalka ah.
Fadlan la xiriir sarkaalkaaga barnaamijka si aad u ogaato haddii ururkaagu u qalmo kordhinta deeq-lacageedkaaga. Waxaan go'aankan ku gaadhnay arrimo dhawr ah, oo ay ka mid yihiin markii deeqdani la oggolaaday, nooca deeqda, filashada deeq-lacageedka bilowga, iyo muddada xiriirka maalgeliyadeena.
10. Waxaan u maleynayaa inaan hore u sii socon doono. Sarkaal barnaamij ma maqli doonaa fikradeyda cusub?
Waxaan soo bandhigi doonnaa fursado aan ku bixinno jawaab celin guud oo ku saabsan istiraatiijiyadda guud ee horumarinta bilaha soo socda.
Marka la eego weydiimaha ku saabsan soo jeedinta deeqda gaarka ah, waxaan kaa codsaneynaa inaad sugto inta aan ku dhawaaqeyno tilmaamaha barnaamijka cusub, laga yaabo inay dhacdo 2020. Deeq bixiyeyaasha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka dhow waa inay sugaan tilmaamahaan cusub si ay u eegaan haddii ay ku habboon yihiin tilmaamaha cusub. Fadlan jooji inaad la xiriirto shaqaalaha fikradaha baaritaanka bilowga ah ilaa tilmaamaha lagu dhawaaqi doono.
11. Shaqada ururkaygu waxay taageertaa yoolalka cusub ee cimilada cusub iyo barnaamijyada bulshada. Xaq ma u yeelan karaa codsashada?
Waa macquul. Markan, waa goor hore in la sheego. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijka cusub ee loogu talagalay barnaamijka ballaarinta ee Midwest Climate & Energy xilliga dayrta 2020. Waxaan weydiisan doonaa dhammaan deeq bixiyeyaasha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka dhow inay sugaan tilmaamahaan cusub. Fadlan jooji inaad la xiriirto shaqaalaha weydiimaha ugu horeeya ama weydiimaha si aad ugala hadasho fikradaha ilaa tilmaamaha lagu dhawaaqi doono.
12. Hadaan ku habooneyn tilmaamaha cusub ee hal barnaamij, miyaa laygu tixgelin doonaa mid kale?
Waa macquul. Markan, waa goor hore in la sheego. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijka cusub deyrta 2020. Waxaan ka codsaneynaa dhammaan deeq bixiyeyaasha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka inay sugaan tilmaamahaan cusub. Fadlan jooji inaad la xiriirto shaqaalaha fikradaha baaritaanka bilowga ah ilaa tilmaamaha lagu dhawaaqi doono.
13. Miyay tahay inaan soo gudbino soo jeedin cusub oo kordhinta deeqda bixida?
Maya, uma baahnid inaad gudbiso soo jeedin cusub oo ku saabsan deeqaha bixitaanka. Si aan u taageerno deeq-bixiyeyaashayaga bixitaanka, waxaan yaraynaynaa shaqada maamulka ee ku saabsan deeqaha bixitaanka waxaanan diyaarin doonnaa kordhinta deeqda. Fadlan la xiriir sarkaalka barnaamijkaaga su'aalo gaar ah.
14. Waxaan haystaa hal sano oo hadhaagii deeqdaydu ahayd laba sano. Wali ma heli doonnaa kala-guur ama kordhinta deeqda bixida, mise sanadka laba ayaa loo xisaabayaa sidii deeqdayda ku-meelgaarka ah?
Deeqaha hadda jira wax saamayn ah kuma yeelan doonaan. Waa suurtagal, iyadoo kuxiran duruufaha deeq-lacageedkaaga gaarka ah, in aad xaq u yeelan karto kala-guuritaan dheeri ah ama kordhinta deeq-bixiyeyaasha.
Shaqaalaha barnaamijka McKnight waxay u adeegsanayaan fahamkooda ku aadan kordhinta ka bixitaanka iyagoo ku saleynaya dhowr arrimood, ay ka mid yihiin markii deeqda la oggolaaday, nooca deeqda, filashada maalgelinta bilowga, iyo muddada xiriirka maalgeliyadeena.
Waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad wali codsan karto deeqaha mustaqbalka ee hoos imaanaya tilmaamaha barnaamijka cusub. U fiirso ogeysiiskayaga ku saabsan tilmaamahaasi inay dhici doonaan deyrta 2020.
15. Maxaa dhacaya marka ku xiga? Waa maxay isbedelada kale ee aan filan karo inaan horay u socdo?
Iyada oo istiraatiijiyadeenu ay kobcayso, waxaan sii wadi doonnaa inaan la qabsano gudaha gudaha Foundation-ka sida ugu fiican uguna fiican ee loo adeegsado waqtigeenna, ilahayada, iyo saameynta. Waqti kadib, waxaan sii wadi doonnaa ka jawaabista baahiyaha adduun isbedelaya iyo jawaab celin bulshada laga helo. Eeg websaydhka oo ka eeg aaladahayaga warbaahinta bulshada si aad u hesho wax cusub. Waanu kula soo socodsiin doonnaa markaan gaarno go'aannada muhiimka ah iyo taariikhda guusha. Waxaan casuumaynaa fikradaada iyo su'aalahaaga, oo waxaan uga jawaabi doonnaa markii faahfaahin dheeraad ah soo baxaan.
16. Sarkaalkeyga barnaamijku miyuu weli noqon doonaa sarkaalkayga barnaamijka?
Haddii ay jiraan wax isbeddelo ah oo xagga shaqaalaha ah, waxaan ku hayn doonnaa deeq-bixiyeyaasheeda kuwo sii shaqeeya.
17. Yaan wici karaa si aan ugala hadlo xaaladda ururkeyga?
Fadlan la xiriir sarkaalka barnaamijkaaga ama xiriiriyaha aasaasiga ah ee aagga aad ka shaqeyso. Haddii aadan lahayn xiriir, fadlan uga tag faallo guud ama su'aal hoosta.
Fadlan la soco inaanan ka jawaabin cabashooyinka ganacsi ee aan la raadsan ama weydiimaha si cad uga soo baxa tilmaamaheena.
18. Goorma ayey isbeddeladan bilaabmayaan?
Waxaan isla markiiba bilaabi doonnaa geedi socod qorsheyn kala guur ah oo dhaqan gala. Deeq kasta oo horey loo ogolaaday go'aankan ma saameyn doono. Waxaan xurmeyn doonnaa dhammaan deeqaha horey loo ogolaaday si deeq bixiyeyaashayadu u sii wataan shaqadooda muhiimka ah. Codsiyada deeqda ee lagu casuumay ee horumarka ku jira waxaa dib loogu eegi doona tilmaamaha hadda jira iyadoo la raacayo go'aammada la gaadho dhamaadka 2019. Ma jiri doonto wareegyo codsiyo bilow ah oo bilow ah midkoodna barnaamijyada Waxbarshada ama R&C.
Waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijka cusub ee jawigayaga cusub iyo barnaamijyada ku saleysan bulshada ee deyrta 2020 oo aan biloownay deeq-bixinta sida ku xusan tilmaamaha cusub ee 2021.
19. Maalgelinta McKnight ma bixin doontaa — deeqda iyo saameynta maalgashiga shaqada — ma raacaysaa dib-u eegis la mid ah?
Waxaan sii wadi doonnaa raadinta fursadaha maalgashi ee udhaxeeya deeqda McKnight iyo saamiga maalgashiga saamaynta. Sidii oo kale, maal galiyadeena saameynta waxay raadinayaan seddex nooc oo soo laabasho: (1) dhaqaale, (2) saameynta bulshada ama deegaanka ee kuxiran deeqda, iyo (3) barashada Aasaaska. Iyada oo tilmaamaha barnaamijka ay isbeddelayaan oo ay isbeddelaan, kooxda maalgashiga ayaa si fakir leh dib ula qabsan doonta barnaamijka maalgashiga ee McKnight.
Si aad ula xiriirto kooxda barnaamijkaaga, fadlan isticmaal foomka hoose.
La xiriir barnaamijkaaga.*
Aragtida FarshaxankaWeydiinta WaxbarshadaCodsiyada CCRPIsticmaalka Koonfur-bari AsiaCilmi-baarista Isticmaalka Middoobey iyo TamartaCodsiyada aasaasiga ah ee MNCodsiga Wabiga MississippiBaaritaanka Naas-nuujintaSu'aalaha Gobolka iyo Communits
Haddii aad jeceshahay inaad ka baxdid jawaab-celinta guud ee ku saabsan ogeysiiskayaga, isticmaal Foomkan. Adigoo isticmaalaya foomkan, fadlan ogsoonow inaan kula soo noqon karin inaan kula soo xiriirno, laakiin waxaan dooneynaa inaan ku siino ikhtiyaar aad ku bixiso ra'yi-bixin aan la garanayn.
Mawduuca: General, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah
Warbixinta Maarj 2020